Ahịa Ahịa na Mgbasa Ozi | Martech Zone
Mgbe obula m huru a vesos blog post ma ọ bụ isiokwu na-ewe otu usoro ahia ma tinye ya na nke ọzọ, ana m echegbu onwe m. N'okwu a, ọ bụ isi n'etiti isi ahịa na mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na itinye ego na azụmaahịa ọdịnaya nwere ike ịgbalite ngwa ngwa na mgbasa ozi nwere ike ịdị larịị ma ọ bụ na-ebelata… ọ pụtaghị na ị ga-ewere mmefu ego gị ma bugharịa ya. N'ezie, ịre ahịa ọdịnaya na mgbasa ozi bụ atụmatụ dị ukwuu.
Marketingre ahịa ọdịnaya aghọwo akụkụ dị egwu nke ahịa B2B, mana ị nwere ike ịchọpụta ụdị ọdịnaya ndị kachasị ewu ewu, ihe kpatara eji ya, yana ọdịnaya kachasị arụ ọrụ? Lelee ihe omuma anyi iji nweta scoop na ihe di oku na ihe na adighi na ahia ahia. Ọdịnaya Mgbasa Ozi Ọdịnaya Ọdịmma Ọhụrụ?
Gbanyụọ igbe ncha m… Ọ bụrụ na m ga-ewepụ ihe ọ bụla na akwụkwọ ozi a if you na-akpọsa, ikwesiri itinye ego na ahia ahia. Ọdịnaya ọdịnaya bụ atụmatụ egosipụtara. Ọ bụghị onye nnọchi, agbanyeghị! Mgbe akwụkwọ dị iche nyere obodo ị na-achọ ịnata ozi, mgbasa ozi nwere ike ịbụ naanị nhọrọ ị ga-enweta ha!
Tags: mgbasa oziederede ederedeahịa b2bBlọọgụzụta-n'imec-larịịikpe ọmụmụCEOKedummefu ego n’ime ọdịnayacontent Marketingahịa ọdịnaya na-emefuọdịnaya dị iche ichedata-chụpụrụ ọdịnayamagazin dijitalụederedeakwụkwọ akụkọetinye ọdịnayaFacebookn'ime ụlọ na ntụgharịn'ime ihe omumeedu ọgbọndu nurturingndu akaraLinkedInahịamicrositesMobile na Mbadamba ụrọPodcastsibipụta magazinibipụta akwụkwọ akụkọakụkọ nyochamgbochi mgbochielekọta mmadụ mediaTwittervideosnzukọ meberewebcastwebinarswhitepapersyoutube
Ọkt 31, 2012 na 6:02 AM
Nnukwu ozi ọzọ infographics. Na post gị, ị na-ezo aka na mgbasa ozi n'efu ma ọ bụ mgbasa ozi akwụ ụgwọ? Echere m na ha nwere nsonaazụ dị iche ma ọ bụrụ na ị gbalịa iji tụnyere mgbasa ozi atọ a na-akwụghị ụgwọ, mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na ahịa ọdịnaya…. :)
Nov 1, 2012 na 7:07 AM
Maka B2B, ịre ahịa ọdịnaya nwekwara ike inyere aka melite mgbasa ozi mgbasa ozi gị